Uhla lwemibhalo ye-Franchise - Amathuba Athengiswayo | I-Franchiseek
Global Isiqondisi se-Franchise
I-Franchiseek iyi-directory yomhlaba wonke yama-franchise athengiswayo kufaka phakathi, ama-master franchise namathuba wamazwe omhlaba wokuthengisa e-UK, USA, Europe, Asia & Emhlabeni jikelele
Okufakiwe Global Franchise
Thola ngezansi amathuba wakamuva we-franchise athengiswayo enkombeni yethu yamazwe omhlaba
Uhla Lomhlaba Lwezikhwama Zomhlaba
Mayelana neFrigiseek Franchise Directory
I-Franchiseek yasungulwa ngonyaka we-1999 kanti kusukela lapho, isize izinkulungwane zabantu abazoba ngama-Franchisees ukuthola umhlaba wabo ofanele emhlabeni jikelele. Isiqondisi seFranciseek Franchise sinhla samakhulu amathuba okuthengiswa emazweni angama-60 emhlabeni wonke kubandakanya namathuba wamazwe we-master Franchise kumkhombandlela we-master Franchise.
Kanye nokufaka kuhlu lwamakhulu ama-master franchise amathuba nama-franchise wamabhizinisi aphesheya ayathengiswa, phequlula okwakamuva izindaba zomhlaba wonke zokuthengisa. Ngibhekabheka amakhulu ama-franchise athengiswa kumkhombandlela we-franchise yangakini ukuze uthole i-franchise yakho ekahle.
Amathuba weFranchise NguMkhakha
Ukuvakasha nokungcebeleka Franchise
I-Franchising ihlinzeka ngendlela yokuba ngumnikazi webhizinisi lakho, kepha hhayi wena. I-franchise yisivumelwano phakathi kwamaqembu amabili; i-franchisor ne-franchisee.
The i-franchisor ihlinzeka ngophawu lokuhweba noma igama lokuhweba lemodeli yebhizinisi elisunguliwe kanye nemininingwane yokusebenza kwebhizinisi, futhi a franchisee ungumuntu okhokha imali yokuqala, kwesinye isikhathi ehambisana nemali eqhubekayo, ebanikeza ilayisense lokuhweba ngaphansi kwalezo zimpahla zokuhweba noma amagama okuhweba futhi enze ibhizinisi elisunguliwe.
Ukufomatha ifomethi yebhizinisi luhlobo olukhonjwa kakhulu kumuntu ophakathi. Ebuhlotsheni bebhizinisi lefomethi yebhizinisi, i-franchisor ihlinzeka i-franchisee hhayi nje igama layo lokuhweba, imikhiqizo nezinsizakalo kodwa lonke uhlelo lokusebenza kwebhizinisi. I-franchisee ngokuvamile ithola ukukhethwa kwesiza nokuxhaswa kokuthuthukiswa, izincwadi zokusebenza ezisebenzayo, ukuqeqeshwa, amazinga emikhiqizo, ukulawulwa kwekhwalithi, isu lokumaketha kanye nokuxhaswa kwezeluleko zebhizinisi kusuka kufrigisor.
Kukhona uhla olukhulu lwama-franchise athengiswa kwisikhombisi-Franchiseek Franchise directory, kusuka kuma-franchise, i-franchise yezimoto kanye nokuhlanza ama-franchise kuya kuma-franchise ahlobene nezilwane kanye nokubekwa ngamapayipi. Uqinisekile ukuthola i-franchise yakho ekahle kunqolobane yamazwe ase-Franchiseek yomhlaba.
Kungani Thenga Franchise?
Kalula nje, lapho uthenga i-franchise, uthenga imodeli yebhizinisi efakazelwe. Ngokungafani nokuqala ibhizinisi lakho kusuka ekuqaleni, i-franchisor isivele idale uphawu lwebhizinisi negama lomkhiqizo, ngawo wonke amaphutha asedlule akhonjwe futhi axazululwa.
U-Franchisor uzobe ephindaphinde lelo bhizinisi lama-franchise ezindaweni zonke ezivele enamanye ama-franchisees wonke alandela ezinyathelweni eziyimpumelelo ze-franchisor.
Yingakho ama-franchise ngokuvamile enesilinganiso esingcono sokuphumelela uma siqhathaniswa nokuqalisa kwebhizinisi. Eqinisweni, ochwepheshe abaningi abaholayo nezinhlangano ze-franchise bathi amazinga okuphumelela wokuqalisa we-franchise angaphezulu kwama-95%, amakhulu kakhulu kunalokho lapho usetha ibhizinisi ngokwakho.
Uma uthenga i-franchise, uvame ukuthola konke okudingayo ukuze uqale kahle. Ngemuva kwakho konke, impumelelo yakho yimpumelelo ye-franchisor. I-franchisor izofuna ukuthi uzuze ngoba uhweba ngaphansi kwegama lomkhiqizo wabo futhi bafuna ukuthi wakhe idumela eliphumelelayo elizokuba nomthelela omuhle kubo, nakwamanye ama-franchisees abo amaningi.
Qalisa namuhla futhi uthole i-franchise yakho ekahle neFranchiseek International.
Khangisa Franchise yakho
Chofoza u- “Faka Franchise” kumenyu enkulu, khetha iphakheji bese ubhalisa.
Yenza kusebenze i-akhawunti yakho
Gcwalisa izinkambu ekhasini lokufakwa kuhlu lokungeza. Khetha izigaba zakho kanye namazwe.
Uhlu lwakho luzovunywa yithimba lethu kungakapheli usuku lokusebenza. Uma kudingekile, singakwazi ukulungisa uhlu lwakho.
Global Izindaba ZaseFrance
22 / 09 / 2020Amalungu amaBhodi ama-5 amenyezelwe njengoba iQFA iqhubeka nokukhula ngokushesha
21 / 09 / 2020I-Pink Spaghetti Yethula Uhlelo Olusha Lokuqeqeshwa Kwamalungelo
18 / 09 / 2020Kuyini i-Master Franchising?
08 / 09 / 2020Izeluleko ezi-6 eziphezulu ze-franchise yomhlaba ephumelelayo
01 / 09 / 2020Ama-Petpals franchisees amabili afinyelela ekugcineni kwemiklomelo kazwelonke yePet Industry Federation (PIF)
01 / 09 / 2020Amakhono ama-5 abalulekile wonke ama-master franchisees okufanele abe nawo
25 / 08 / 2020Umthetho we-IR35 nomphumela wawo kumaFranchise
21 / 08 / 2020UTaylor Made Franchising utholela uThomas Cleaning